Laacibiinta Juventus ee wajahaysa Pescara oo la magacaabay! (Yaa maqan yaase soo laabtay?) – Gool FM
(Torino) 18 Nof 2016 – Giorgio Chiellini iyo Claudio Marchisio ayaa dib ugusoo laabtay kooxda Juventus ee loo xulay kulanka Pescara, balse waxaa weli maqan Dani Alves iyo Paulo Dybala.
Kulankan ayaa dhici doona habeen dambe, waxaana horyaallada Talyaaniga sidoo kale ilaa iyo sanadka cusub ka maqnaanaya Andrea Barzagli kaddib markii uu garab ka wareegey.
Dybala, Marko Pjaca iyo Medhi Benatia ayaa iyaguna saaran bareellaha daawada, waxaa dhanka kale la nasiyay Dani Alves oo kasoo noqday waajibaadka qaran ee dalkiisa Brazil. Chiellini, Marchisio iyo Kwadwo Asamoah ayaa usoo laabtay Max Allegri.
Juventus-ta wajahaysa Pescara: Buffon, Chiellini, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Hernanes, Alex Sandro, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Asamoah, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Audero, Evra, Kean
TOOS u daawo: Lille OSC vs Olympique Lyon - LIVE